DMA: hutsva hwekuchengetedzeka hwakawanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Kushushikana kutsva kwaonekwa kuburikidza DMA (Yakananga Memory Yekuwana). Aya marudzi ekurwiswa kweDMA hachisi chinhu chitsva, ave achizivikanwa kwemakore, asi ikozvino boka revatsvakurudzi vezvekuchengetedza vakaona tyisidziro nyowani inobata masisitimu makuru ekushanda: GNU / Linux, FreeBSD uye mamwe maBSD, Microsoft Windows uye Apple macOS. Kurwiswa kunoshandisa kushungurudzika uku kunogona kupfuura nzira dzakachengetedzwa dzekuchengetedza.
Nokubatanidza mudziyo unopisa-plug kune komputa, izvi zvinorwiswa zvinogona kuitwa. Iwo majaira anogona kuve akasiyana kwazvo, kubva paUSB network adapter, mbeva, keyboard, pendrive kana yekunze hard drive, yekunze giraidhi kadhi, maprinta, nezvimwe. Asi zvinonyanya kukanganisa chiteshi Thunderbolt 3ndiko kuti, saka zvekare pa USB-C iyo yakavakirwa pairi. Kutinhira kunobvumira zvinokamhina zvakabatana kuburikidza nazvo kudarika mitemo yekuchengetedza yeanoshanda system uye system memory, kugona kuwana zvimwe memory kero (verenga uye nyora) izvo zvinofanirwa kuchengetwa. Munzvimbo idzodzo dzekurangarira, panogona kunge paine data rakavanzika kwazvo senge mapassword akachengetwa, bhangi kana marineti ekuti uwane mamwe masevhisi akakosha, tsika dzakavanzika dzakachengetwa nebrowser, nezvimwe.
Zvekare OS inoshandisa iyo unit IOMMU (I / O memory management unit) yekuvharira kumwe kurwisa kweDMA kwekutanga nekudzivirira zviri pamutemo zvigadzirwa zvekunze kubva kune dzimwe nzvimbo dzekurangarira uye kungovabvumira kuwana avo akakodzera. Panzvimbo iyoyo, chituru chinonzi Thunderclap chinogona kupusisa kudzivirirwa uku uye kuchipfuura nechinangwa chisiri pamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » DMA: hutsva hwekuchengetedzeka hwakawanikwa